Mareykanka oo sheegay in ay saddex dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ku dileen gobolka Bay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo sheegay in ay saddex dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ku dileen gobolka Bay
Mareykanka oo sheegay in ay saddex dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ku dileen gobolka Bay
September 6, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Mareykanka oo sheegay in ay saddex dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ku dileen gobolka Bay.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka oo kaashanaya ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa qaaday weerar duqayn ah waxayna dileen saddex dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab shalay oo Talaado ahayd, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan uu soo saaray maanta oo Arbaco ah ku sheegay.
“Iyadoo lala kaashanayo Dowladda Soomaaliya, Waaxda Difaaca waxay duqayn sax ah ka geysatay bartamaha Soomaaliya oo ka dhan ahaa maleeshiyada Al-Shabaab Talaadadii, 5-tii Sept. qiyaas ahaan 9:50 a.m. saacada Soomaaliya, waxaana lagu dilay saddex argagixiso,” Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan ku yiri.
“Howlgalka ayaa ka dhacay gobolka Bay ee Soomaaliya, oo qiyaas ahaan 75-km ka xiga dhanka galbeed ee caasimada Muqdisho. Mareykanka ayaa qaaday howlgalka iyaga oo taageero siinaya Howlgalka Midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya (AMISOM) iyo Ciidamada Qaranka Soomaaliya (SNA) kuwaasoo ka howlgala deegaankaas.” Bayaanka ayaa intaas ku sii daray.
Bayaanka dhexdiisa, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan bartilmaameedka Al-Shabaab iyo xeryaheeda tababarka ee kuyaala gudaha Soomaaliya.
October 21, 2017 Wasiirka Amniga Soomaaliya oo sheegay in dowladdu ay soo bandhigi doonto faahfaahinta qaraxii Muqdisho
June 14, 2017 Ugu yaraan sideed qof oo lagu dilay kadib weerar ay Al-Shabaab ku qaaday huteel kuyaala Muqdisho
US says it killed 3 Al-Shabaab fighters in Bay region
Qatar Airways oo duulimaad todobaadle ah ka bilowday Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Diyaaradda Qatar Airways ayaa maanta oo Isniin ah duulimaad todobaadle ah ka bilowday magaalada Muqdisho. Munaasabada furitaanka ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle, halkaas oo diyaaradii ugu horeysay ee ka socota [...]
Soomaaliya oo bartilmaameedsanaysa suuqyo cusub oo loo dhoofiyo geela
Garoowe-(Puntland Mirror) Soomaaliya oo ah dalka saddexaad ee ugu badan geela, ayaa bartilmaameedsanaysa suuqyyo cusub oo loo dhoofiyo geela, iyadoo ay muuqato in dhaqaale fiican ka heleen ganacsiga dhoofka xoolaha nool. Dalka kuyaala Geeska Afrika [...]